एकै दिन भारतका लागि धोनीका दुई किर्तिमान ! - एकै दिन भारतका लागि धोनीका दुई किर्तिमान !
एकै दिन भारतका लागि धोनीका दुई किर्तिमान !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३० असार, 07:53:05 PM
काठमाडौँ, ३१ असार । भारतीय क्रिकेट टिमका विकेटकिपर महेन्द्रसिंह धोनीले एकै दिन दुई वटा किर्तिमान बनाएका छन् । भलै इंग्ल्याण्डसँगको दोश्रो एकिदवसीय क्रिकेटमा हारेको भारतका लागि पुर्वकप्तान धोनीले दुई वटा रेकर्ड राख्न सफल भए ।
पहिलो रेकर्ड उनले भारतका लागि सर्वाधिक ३ सय क्याच लिए । एकदिवसीय क्रिकेटमा भारतका लागि धोनीले सवैभन्दा धेरै रन लिएर पहिलो खेलाडी बनेका हुन् ।
धोनीपछि १ सय १० क्याचसहित नयन मोंगिया दोश्रो र राहुल द्रविड ७२ क्याचसहित तेश्रो स्थानमा छन् । विश्व क्रिकेटमा धोनीभन्दा अगाडी एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर र कुमार सांगाकारा छन् । गिलक्रिष्टले ४१७, बाउचरले ४०२ र सांगाकाराले ३८३ क्याच लिएका छन् । सांगाकारपछि धोनी सर्वाधिक क्याच लिने चौथो खेलाडी बने ।
यस्तै इंग्ल्याण्डसँगको खेलमा धोनीले १० हजार रन पनि पुरा गरेका छन् । उनले इंग्ल्याण्डविरुद्ध ३३ रन बनाएर १० हजार रन बनाएका हुन ।
१० हजार रन बनाउने उनी चौथो भारतीय हुन ।
२०७५, ३० असार, 07:53:05 PM